_The snowman_, Akakundikana firimu vhezheni yenhau yaJo Nesbø | Zvazvino Zvinyorwa
_The snowman_, Akakundikana firimu vhezheni yenhau yaJo Nesbø
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Novela, Nhema nhema
Pakupera kwaJuly ndakanyora ichi chinyorwa mushure mekuona yekutanga tirera yeiyo firimu vhezheni ye Iye Snowman, Rinozha rakatengwa zvakanyanya raJo Nesbø. Ini ndakachengeta toni irimo pamwe nekuchengetedza nezve izvo zvataigona kutarisira vese vaverengi vemunyori weNorway nevatariri vasina mareferenzi. Zvakanaka, yakaburitswa mazuva gumi apfuura uye nhasi ini ndatova nazvo maonero ekuti ini chete ndinogona kutora mutoro uye ini ndanga ndatonyumwa.
Zvakare iyo bhaisikopo harirove iro rekupedzisira regumi kunyorwa kwenyaya. Uye iyi yakanyanya kusimba nekuti izvo zvinyorwa zvaive zvakapfuura zvakanaka maererano nechirongwa, mhepo uye mavara makuru akagadzirwa naNesbø. Nekuti chisikwa chake chaanodisisa uye anokwezva, Commissioner Harry Hole, haana kukodzera mufananidzo kana rondedzero yeimwe yenyaya dzake dzakanakisa dzakashambidzwa, dzisina chinhu uye dzinofinha. Kana director, weSweden Tom Alfredson, kana vekunze uye vasina kujairika vakakanda havasi kuita basa iri.
1 Iyo bhaisikopo
2 Mutungamiriri uye bhaisikopo
4 Uye chimwe chinhu chakakosha ndechekuti ...
5 Saka ...
Iwe waifanira kuona iyi bhaisikopo, kunyanya uye kunyanya kana iwe uri muverengi asina mhaka waJo Nesbø uye iwe uchizvifunga izvo Harry hole Ndiye mumwe weanonyanya kusimba, anokwezva uye akanakisa emavara mavara yeiyo yazvino mhosva mhosva. Zvakare, iwe unofanirwa kuzviona kuti uve neicho chaicho uye chakazara maonero uye nekunzwa kuti unogona kunyatso kuenderera nekuvanamata ivo pasina matambudziko. Uye kuti icharamba ichiita saizvozvo. Nekuti izvi zvisina basa vhezheni cinematic zvachose hapana chinoshanduka pamusoro pemafaro kuti takawana vaverengi veNesbø nemanoveli avo.
La kusuwa Haisi nekuti iyi bhaisikopo yakanga isingakoshi uye ichitadza, asi nekuda kweiyo husimbe hwakadzika kana uchizviita. Zvichida pakutanga pfungwa yakavhenekerwa yakasarudza kuti ingave iri zano rakanaka. Iye munyori weNordic weakanakisa uye akakurisa anotengesa, iyo inotonhora cinema ine fashoni uye iyo inowanzo kupa kutamba kwepasirese, zvinonzwika Martin Scorsese semutungamiriri, anopenya mazita emutambo wepasi rose, iyo yakanaka Norway ine chena seti ... Pamwe.
Ipapo Scorsese inongogara semugadziri chete, maAmerican vanoisa mari mukati uye kusaina Tom alfredson, director weSweden anofungidzirwa mukurumbira uye a kukandwa nenyika dzakawandisa uye izvo, kazhinji, hazvienderane netsananguro dzepanyama dzevanyori vezvinyorwa. Uye zvinoitika zvinoitika. Izvi.
Mutungamiriri uye bhaisikopo
Uye zvinoita sekunge Alfredson akagara rimwe zuva pachigaro chemutungamiriri uye pakati pekuteedzana nekuteedzana kana kuti aiputa mudzanga kana kumborara. Nekuti dai aive chaiko kwaaifanira kunge ari, iyi bhaisikopo haigone kubuda saizvozvo yakadzima, yakashambidzwa-kunze, bland uye isina kujeka. Zvakapesana chaizvo nezviri zvinyorwa zveNesbø uyezve ndivanaani uye sei mavara avo.
Ndine chokwadi nazvo Dai chirongwa ichi chakaitwa nevaNorwegi, chingadai chisina kuenda zvakashata. SIwe unongo fanira kuona yakanakisa imwe Danish saga yeDhipatimendi Q, yakanyorwa naJussi Adler-Olsen. Asi hazvibatsiri kuchema pamusoro pezvisingagoneki.
Izvo zviripo ndizvo zviripo: hapana, a zvisina maturo kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Chete iwo makomo akanaka eNorway anoponeswa, chando, chando uye iyo inotonhorera inotonhora kune avo vedu vanozvida. Zvimwe zvese kuteedzana kwezvinononoka, zvakasviba uye zvinoshungurudza zviitiko mune inovhiringidza montage, kunyanya mukufamba kwenguva. Iko hakuna mweya, hakuna hupenyu kana manzwiro. Y hapana anoita kunge anoziva kwaari, ndoda kuti anotamba ndiani. Uye kana vakadaro, vanoita kunge vari kushamisika nezvavari kuita ikoko.
Wekutanga, ndakayemura Michael Fassbender. Akaita kunge akagamuchira kuti haana kupa chimiro chaHarry Hole uye akazvimisikidza pakuisa pachiso chekutonhora chinoonekwa nekufambisa eyelashes ake zvishoma. Y Harry Hole haasi iye murume zvemukati, hazvitonhore, kana kusuwa kana zvechokwadi zvinoshungurudza, asi zvineshungu, zvisingatarisirwe, zvisikwa uye zvine rudo. Uye chidhakwa, asi kwete chidhakwa chakatorwa yeiyo iyo katatu iyo yavanoratidza kuti yakarara pasi, ivo vatoda kuti iwe utende kuti ndizvo. Chingori chidimbu chimwe chete chinoita kunge chisina basa asi chakakosha kune vaverengi venhevedzano: havatombo rova ​​mucherechedzo nebhodhoro re Jim danda nekuti vakaisa imwe yevodka.
Uye wechipiri, iye mutambi wechihedheni (wemafirimu auteur, hongu) ndiani French Charlotte Gainsbourg, akarasika zvikuru mune rakashamisa basa uye riine huremu hwakawanda seyaRakel Fauke. Nekudaro panogona kuve pasina chemistry kana chero chinhu chinovimbika pakati pevanyori vanyori vanomiririra chimwe chinhu, imhaka yemakemikari avo, kuda uye rudo.. Kwakaipirei uye kunotonhora izvo zvinofungidzirwa kuti zvinoregedza chiitiko icho vese vatambi vanogovana mune ingangodaro inodanana nguva
Asi ndezvekuti hapana chakanaka uye yekupedzisira mashanga kuona isingazivikanwe nekudzokororwa Val Kilmer. Kana chii kutambiswa kuti ivo vatambi vakanaka seChirungu James D'Arcy kana norwegian Jacob Oftebro. Ivo chete avo inogona kuponeswa zvishoma idzo swedi Rebecca Ferguson saKatrine Bratt naJonas Karlsson saMathias Lund. Asi ikozvino.
Uye chimwe chinhu chakakosha ndechekuti ...
... kana vaverengi veNesbø vangazviwana zvisina chinhu, vaoni vasingazive Hole zvakasikwa varasika hapana mubvunzo murondedzero yakashambidzwa. Uye ivo havazonzwisise iwo asina kunyatso kuvandudzwa mifananidzo yeavo mavara, kunyanya iwo mukuru. Nezve iyo pfungwa Gore, zvakanaka sei Nordic cinema inoda kuvaratidza, inosanganiswa nekusave nehanya usati waona.
Zvisinei, zvimwe zvakawanda zvinogona kunongedzerwa, saizvozvo yekupedzisira decaf izvo ini ndinonzwisisa zvinonyanya kuitika (uye zvinonzwisisika) kuchinjika. Asi kwainge kwatove iko kureba kwedambudziko dai vakashinga kupfura magumo ekunyanyisa anotyisa.
Hapana chinoitika. Harry Hole achiri asina gwapa, asina chaanopomerwa uye asina kukwana zvakakwana pachikwiriso chemamirioni evaverengi pasi rese. Asi zvirinani varege kuitamba futi mu cinema. Havana kukuitira zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » _The snowman_, Akakundikana firimu vhezheni yenhau yaJo Nesbø
Neruda haana kufa nekenza
Pfupiso yebasa "La casa de Bernarda Alba" naFederico García Lorca